Yavuz Sultan Selim တံတား | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာYavuz Sultan Selim တံတား
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနမှ ၀ န်ကြီးအမ်စီဟိုက်တာရန်းက Bursa-Gölbaşı-Yenişehirအပိုင်းရှိ Bursa-Bilecik (Osmaneli) လိုင်းရှိ Bursa-Bilecek HT စီမံကိန်းတွင်အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Osman [ပို ... ]
Köklüce၏မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းရှိ Sivas-Ankara အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသည် Turhan ကုမ္ပဏီ၏အာဏာပိုင်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဤတွင်ဂျာနယ်လစ်များ၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား၊ ဝန်ကြီး Turhan၊ Ankara-Sivas အမြန်နှုန်းလိုင်းစီမံကိန်း [ပို ... ]
CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle ilgili başvurusuna gelen yanıtı kamuoyuyla paylaştı. Adıgüzel’in edindiği bilgilere göre YSS Köprüsü günlük ortalama 1 milyon [ပို ... ]
Kocaeli Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde kullanılmak üzere açılan taş ocağının ticari amaçlı olmadığını, otoyolun tamamlanmasının ardından ruhsatının iptal edileceğini açıkladı. İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen, iki [ပို ... ]
Osmangazi Köprüsü’nden Temmuz 2016 ve Haziran 2019 tarihlerini kapsayan3yıllık dönemde 22 milyon araç geçtiği bildirildi. Köprü için yılda 14 milyon 600 bin (3 yılda 43 milyon 800 bin) [ပို ... ]
ဒါဟာ Gayrettepe အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်က Metro လိုင်း၏အလင်းညျ့ရှု
ဝန်ကြီး Turhan, Gayrettepe-အစ္စတန်ဘူလ်-အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်လေဆိပ်က Metro လိုင်း Hasdal ကြည့်ရှုပုဒ်မဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတူးခြင်းနှင့်ပြီးမြောက်ခြင်းစစ်ဆင်ရေးအလင်း၏အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်သည်။ ဒီမှာမိန့်ခွန်းထဲမှာရထားလမ်းစနစ်ကမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများအားမိမိဖြေရှင်းချက်၏အရေးပါမှုကိုအကြောင်းပြောနေတာ [ပို ... ]
Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်၏လက်အောက်ခံ TransportationPark A. Ist. သည် Mavi Blue Corridor သဘာဝဓာတ်ငွေ့ယာဉ်များပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်တွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဘတ်စ်ကားနှင့်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ Haliçကွန်ဂရက်စင်တာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအစီအစဉ်သည် Kocaeli Metropolitan Municipality တွင်ပါဝင်သည်။ [ပို ... ]